Postaga: Mgbasa ozi mgbasa ozi ọgụgụ isi nke AI kwadoro | Martech Zone
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-eme mgbasa ozi, obi abụọ adịghị ya na email bụ usoro dị oke mkpa iji mee ya. Ma ọ na-etinye mmetụta ma ọ bụ mbipụta na akụkọ, pọdkastị maka ajụjụ ọnụ, mgbasa ozi ahịa, ma ọ bụ ịnwa ide ọdịnaya bara uru maka saịtị iji nweta njikọ azụ azụ. Usoro maka mkpọsa mgbasa ozi bụ:
Chọpụta nke gị ohere ma chọta ezigbo ndị ị ga-akpọtụrụ.
Zụlite nke gị pitch na cadence ime arịrịọ gị ma mara ọkwa mgbe enwere nzaghachi.
Nyochaa, zaghachi, nwalee ma kwalite nke gị mkpọsa ịbawanye ọnụego nzaghachi.
Nke a na-abụkarị usoro ntuziaka nke chọrọ ọtụtụ ngwaọrụ - ijikọ ọdụ data mmekọrịta ọha na eze, imepe ọdịnaya n'etiti ndị ode akwụkwọ, yana iwulite mkpọsa ahụ n'elu ikpo okwu email nke enwere ike ịhazi ma nwee ike inye gị akụkọ.
Ugbu a ị nwere ike nweta atụmatụ ndị a niile n'otu ikpo okwu - Postaga.
Jiri Postaga zipu ozi-e oyi dị mfe karị
Ọ dịghị onye nwere mmasị ịnata ozi-e ndebiri. Usoro mgbasa ozi niile n'ime otu Postaga na-enyere gị aka ịmepụta mkpọsa mgbasa ozi ahaziri iche. ọgụgụ isi nke PostagaAI) onye inyeaka na-achọta snippets isi na ozi ka ị nwee ike ịkọ ndụmọdụ akọwapụtara nke kọntaktị kọntaktị gị nyere ma mee ka ozi-e gị bụrụ nkeonwe.
Postaga na-abịa na nhọrọ mgbasa ozi edeburu nke egosipụtara na ọ dị irè, gụnyere:
Ụlọ elu (Multicraper) mkpọsa ebe ị na-enye ọdịnaya dị mma nke gị karịa ndị asọmpi gị na saịtị ndị ọzọ nwere njikọ azụ azụ na ha.
Mgbasa Ọgbọ ire ere mkpọsa ebe ị na-ahazi mkpọsa kpọmkwem maka niche gị wee tụọ atụmanya kwesịrị ekwesị.
Mgbasa ozi ndị ọbịa Podcast na pọdkastị dị iche iche iji ruo ndị na-ege ntị ọhụrụ wee kwalite ndu gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Mgbasa ozi ndị ọbịa na akwụkwọ ndị dị mkpa iji wulite iru gị yana ọkwa ọchụchọ site na backlinks.
Mgbasa ozi netwọkụ ebe ị nwere ike iwulite mmekọrịta ma tolite site na mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi.
Nyocha mbanye ebe ị na-arịọ akaebe na ọkwa sitere n'aka ndị ahịa gara aga nwere obi ụtọ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Tinye ngwaahịa gị gaa na ndepụta dị na saịtị ndị ọzọ na-akwalite ndị asọmpi gị.
Nnweta akụrụngwa iji kwalite ndị isi gị ma ọ bụ ọdịnaya maka nchịkọta ndị ọkachamara ma ọ bụ akụkọ akụrụngwa na saịtị ndị ọzọ.
Postaga na-azọpụta gị site n'iji aka gị chọgharịa maka kọntaktị ziri ezi, na-achọta kọntaktị kacha mkpa maka ohere ọ bụla. Ị nwere ike ịchọta adreesị ozi-e ha, aka Twitter, na profaịlụ LinkedIn. Ị nwere ike itinye ndị a ozugbo na usoro njikwa mmekọrịta ndị ahịa ma tinye ha na mkpọsa gị.
Ị nwere ike ịtọ ọtụtụ mmetụ aka na mgbasa ozi mgbasa ozi gị wee megharịa arịrịọ ndị ahụ ka ị chere naanị maka nzaghachi gị.
Ma, n'ezie, ị nwere ike ịkọ akụkọ zuru oke na mkpọsa gị.
na Postaga, ị nwere ike rụọ ọrụ mgbasa ozi ọgụgụ isi… na-ezubere atụmanya ziri ezi na ozi ziri ezi iji nweta ọnụego nzaghachi dị elu.
Bido Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị!
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Postaga na m na-eji njikọ ndị ahụ n'isiokwu a.
Tags: mkpọsa backlinknjikọ azụlinkkọntaktị nchekwa dataCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịachọta kọntaktị linkinchọta kọntaktị twitterije ozigbonchekwa data mgbasa ozimgbasa ozi podcastpostagapr nchekwa dataahia ahiaseo mgbasa ozi